‘Ny Aiko Ho An’i Iràna’: Tsingerintaona Faha-4 Nahafatesan’ilay Iraniàna Mpikatroka, Sattar Beheshti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2016 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, עברית, Türkçe, Español, English
Gohar Eshghi renin'i Sattar Beheshti mitazona ny sarin-janany ho fanoherana ny namonoan'ireo mpaka am-bavany avy amin'ny governemanta azy. Lasa endrika amantarana ny revolisionan'ny famoretana fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto ao Iràna i Eshghi. Sary an'ny ICHRI.
Tamin'ny 30 Oktobra 2012, nosamborin'ny Polisin'ny Aterineto Iraniàna i Sattar Beheshti. Nolazaina fa heloka bevava vitany ny nandefasany ny fomba fijeriny politika tao amin'ny media sosialy, izay nahitàna fanakianana mivaivay ny fitondràna ao Iràna natodika tamin'ny Mpitondra Faratampony. Tsy tafaverina an-trano intsony mihitsy i Beheshti hatreo.
Nifandray tamin'ny fianakaviany ireo manampahefana tao amin'ny fonja, ny 6 Novambra 2012, nilaza tamin'izy ireo haka ny vatana mangatsiakany. Nodarohana mandrapahafatiny i Beheshti.
Taona efatra taorian'ny nahafatesany, lasa fanahin'ny fanoherana ao Iràna i Beheshti, ao anatin'ny tolona iray mitohy mba hanoherana ny famoretan'ny governemanta ny fahalalahana maneho hevitra.
Sattar Behesti, bilaogera iray maty noho ny fampijaliana nataon'ireo mpaka am-bavay azy tany am-ponja. Sary miaraka amin'ny reniny. Sary natolotry ny Fanentanana Iraisampirenena ho an'ny Zon'Olombelona ao Iràna.
Iràna no ohatra iray maharesy lahatra momba ny asa mifamaly misy amin'ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana sy ireo mpikatroka mafàna fo ety anaty aterineto. Ny fisondrotry ny aterineto dia nitondra ho aminà fahafahana maro hanao zavatra, saingy koa tetikady vaovao avy amin'ny fanjakàna mba hamoretana io tontolo iray vaovao io izay nanolotra fialantsasatra tsara fahatongavana ho an'ireo media ambany fifehezana mavesatry ny fanjakàna. Lasa singa iray fanalahidin'ireo hetsika nanerana ny firenena tamin'ny 2009 nanoherana ny hosoka tamin'ny fifidianana sy ny kakay amin'izay mipetraka eo amin'ny fitondràna ny fikatrohana an-tserasera.
Nirona tamin'ny fampiasàna herisetra ny governemanta mba handravàna ny endrika hita maso tamin'ireo hetsipanoherana, ary nitodika taminà endrika vaovaon'ny fifehezana ny vaovao mba hampitsaharana ny hetsika anaty aterineto. Tafiditra tamin'izany ny fanatsaharana nandritry ny fotoana fohy ny fifandraisana Aterineto tao amin'ny firenena, hatramin'ny fanarahana maso tety anaty serasera sy ivelany natao tamin'ireo mpikatroka. Ny habaka aterineto no noheverina hatry ny ela ho toy ny fanolo mifandraika tsara amin'ny zavamisy ho an'ny mpanohitra sy ny fahalalahana maneho hevitra, mba hanoherana ireo toerana ao Iràna natao ho an'ny daholobe nefa feno faneriterena, mihoatra lavitra noho ny taorian'ny famoretana tamin'ny 2009. Kanefa feno loza mitatao io fikatrohana an-tserasera io — araka ny hita noporofoin'ny raharaha Beheshti.
‘Ny Aiko Ho An'i Iràna’
Mpiasa an-tselika isanandro, 35 taona i Beheshti, avy amin'ny tanàna iray kely fidirambola ao amin'ny manodidina an'i Tehran. Isankalina izy dia namoaka ny hasosorany sy naneho ny fijeriny tao amin'ny bilaogy iray antsoina hoe “Ny Aiko Ho An'i Iràna.” Ny anaran'ny bilaoginy dia tsilalaonteny avy aminà teny faneva iray lasa nalaza be tamin'ireo famoriam-bahoaka fanoherana ny governemanta. Voalaza fa efa voasambotra i Beheshti nandritra ireo fihetsiketsehan'ny mpianatra tamin'ny 1999, ary nijanona ho manta vava hatrany tamin'ny fanehoany ny fijery politikany.
Ireo lahatsoratra tamin'ny bialogin'i Beheshti dia nifantoka tamin'ny fisamborana sy ny fanagadràna ireo mpikatroka mafàna fo, ary naneho hatezerana sy hasosorana noho ireo tsy rariny isanandro miseho ao Iràna. Nandritry ny Oktoba 2012 dia niova ireo lahatsorany, na tamin'ny endrika, na ny fiteny. Naneho tamim-pahasahiana ny fihantsiany ny fitondràna izy, nihoatra ny tsipika mena, toy ny fanakianana imasom-bahaka ny Mpitarika Faratampony. Ny fanoherana mibaribary tahaka izany, indrindra fa ny olona ambony indrindra ao amin'ny firenena, dia fantatra fa tsy maintsy hozasiana faran'izay henjana.
Ny 22 Oktobra, nitodika tamin'i Ayatollah Khamenei i Beheshti tao anatinà lahatsoratra iray feno fihantsiana izay mety vao mainka nanamafy ny momba azy teo am-pelatanan'ireo manampahefana.
Azoko antsoina hoe mpanakanton'ny famonoana olona ianao. Minoa ahy, mpankanto ianao amiko.
Ny andro talohan'ny nisamborana azy, nandefa lahatsoratra iray farany milaza loza i Beheshti. “Norahonan-dry zareo aho omaly ary hoy izy ireo hoe: ” tsy ho ela ny reninao dia hitafy mainty satria tsy hainao ny manakombona ny vavabenao io” “. Na izany aza, nampian'i Beheshti hoe, “Tsy hijanona hangina aho na dia amin'ny fotoanan'ny fahafatesako aza.”
Ny 30 Oktobra i Beheshti no nosamborin'ny Polisin'ny Aterineto (na FATA) ary nentina nankany amin'ilay fonja malaza ao Iràna, Evin. Andro maro taorian'ny nitazonana azy, maty tamin'ny fomba feno misitery i Beheshti ny 3 Novambra. Araka ny tatitra, maty noho ny fahavakisan-drà anaty i Beheshti, rà vaky tany anaty havokavoka, voa ary ny atidohany. Taorian'ny nahafatesan'i Beheshti dia 41 ireo gadra noho ny politika tao amin'ny fonjan'i Evin no nanasonia taratasy iray nilaza fa”hita mazava tsara” teny amin'ny vatany ireo mariky ny fampijaliana fony izy notànana tao amin'ny Sakelka 350c tao Evin.
Voaheloka hifonja telo taona an-tranomaizina, roa taona an-tsesitany, ary vely karavasy in-74 i Akbar Taghizadeh, ilay mpaka am-bavany avy amin'ny FATA , tomponandraikitra tamin'ny fidarohana an'i Beheshti, noho ny vono olona tsy nahy nataony. Nolavin'ny fianakavian'i Beheshti ny hanaiky ilay fitsaràna na ilay didy. Toy izao no voalaza fa notenenin'i Gohar Eshghi reniny:
Izahay sy ny mpisolovava anay dia tsy nanatrika izany lazaina fa fotoam-pitsaràna izany ary avelanay ho an'ny taranaka hoavy sy ny tantara ny fitsaràna [ity raharaha ity].
Fombandrazana ny fanoherana
Tadiavin'ny fitondràna ao Iràna havadika ho toy ny tranga maningana ny raharaha nahafaty an'i Beheshti, amin'ny alàlan'ny fanasaziana ireo rehetra voarohirohy tamin'ny fahafatesany ary tamin'ny filazàna fa nisy fanadihadiana lalina natao. Kanefa, tsy ny raharaha Beneshti no voalohany, ary tsy ho ny farany ao Iràna.
Tamin'ny 2009, Omid Reza Mir Sayafi, Iraniàna bilaogera,29 taona, sady mpanao gazety, maty tao Evin rehefa namita sazy roa taona sy tapany. Lohateny vaventy teny anaty gazety ny raharaha Sayafi satria izy no iray tamin'ìreo bilaogera voalohany maty teto an-tany nandritry ny fanefàna sazy tany am-ponja.
Tsy nialan'ny fitondràna ny fanamelohana ho faty ny hetsika ety anaty aterineto. Ny 4 Aogositra 2008, novonoin'i Iràna ilay bilaogera Yaghoob Mehrnehad, mpikatroka politika sady mpikambana avy amin'ny Baloch vitsy an'isa ao Iràna. Mehrnehad dia nampangaina ho mpikambana tao anatin'ireo fikambanana milisy Baloch, raha ny hafa kosa nitàna ny hoe natao lasibatra noho zavatra nosoratany izy.
Tamin'ny 2011, natombok'i Iràna ny onjam-panenjehana faharoa nikendreny irao mpikatroka mafàna fo. Olona marobe toa an'i Vahid Asghari sy Mehdi Alizadeh no nomeny fanamelohana ho faty, voampanga ho nanao korontana nanohitra ny fanjakàna, nanompa ny finoana silamo ary nanao fihetsika tsy mendrika. Tsy mpikatroka ireo hafa ireo, toa an'ilay mpanome endrika tranonkala, Saeed Malekpour, saingy niatrika fitsaràna, nampangaina ary nohelohina ho faty na izany aza. Ny sasany tamin'ireny fanamelohana ireny, isan'izany ny an'i Malekpour no nofoanana, raha niafara tamin'ny famonoana kosa izany ho an'ireo hafa — tamin'ny Septambra lasa teo i Alizadeh no novonoina – fa mbola tohizan'i Iràna hatrany ny fanaovana lasibatra ireo mpikatroka, indrindra fa ireo izay manana ny dian-tànany ety anaty dizitaly.
Vakio misimisy kokoa ao amin'ny Mpitatibaovao Tsy Voafetran-tSisintany (RSF) ny momba ireo mpisera amin'ny aterineto nohelohina ho faty tao Iràna.
Raha manamarika ny faha-efatra taonan'ny nahafatesan'i Sattar Beheshti ny anio, mbola mitondra ny fomba fanaon'i Beheshti amin'ny fihantsiana kosa ny reniny, satria laviny ny hijanona tsy hiloa-bava momba ireo tsy rariny misy ao amin'ny fireneny. Mazàna izy no azo sary ao an-tranony miaraka amin'ny sarin'ireo Iraniana mpanohitra izay maty novonoina. Efa lasa trano fivoriana ho an'ireo Iraniàna mpanohitra ny tranony, ary toy ireo reny izay manan-janaka maty novonoin'ny Shah, mpitondra teo aloha, lasa endriky ny fanoherana ho an'ireo Iraniàna izy. Naverimberiny ny antsony hisian'ny rariny, tsy ho an-.janany irery ihany, fa ho an'ireo Iraniàna rehetra mpanohitra :
Amin'ny maha-reny – mbola zavadehibe lavitra noho io, indrindra amin'ny maha-renin'i Sattar Beheshti – fanapahankevitra tsy manaiky lembenana ny ahy : ho asehoko an'ireo milaza ho ankilan'ny vahoaka fa tsy handositra na inona na inona aho.
Tsy isalasalàna fa ny hampangiana an'i Beheshti no politikan'ny fitondràna, saingy ankehitriny ny teniny dia manako manerana ny tany ho toy ny fanehoana izay tsapa saingy tsy lazaina any am-po sy fanahin'ireo Iraniàna an-tapitrisa.